Baarlamaanka Cusub Ee Soomaaliya Oo La Dhaariyay iyo Xubno Muran Ka Taagnaa Oo Ku Jira | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on December 27, 2016 by sdwo · No Comments
Muqdisho (SDWO.com): Xildhibaanadda cusub ee baarlamaanka labadda aqal ee sare iyo hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta dugsiga booliska general Kaahiye ee magaaladda Muqdisho.
Xildhibaanadda labadda aqal ee la dhaariyay ayay tiradoodu dhamayd 283 xildhibaan, kuwaas oo 242 ka mid ah ay yihiin aqalka hoose, halka 41-ka kale-na ay yihiin aqalka sare.
Waxaana baarlamaanka cusub dhaariyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Saleebaan.
Guddoomiyaha gudiga doorashooyinka dad-ban ee Soomaaliya Cumar Maxamed Cabdulle, ayaa sharaxaad ka bixiyay tiradda xildhibaanadda maanta la dhaariyay iyo ilaa hadda tiradda xildhibaanadda labadda aqal ee ay siiyeen shahaadadda aqoonsiga xildhibaan-nimo.
Waxaanu yidhi “Tiradda guud ee xildhibaanadda maanta la dhaariyay waa 283 xildhibaan, oo 242 ka mid ah ay yihiin golaha shacabka, halka 41-tana ay yihiin aqalka sare. Tiradda aanu shahaadadda aqoonsiga xildhibaan-nimo siinay waa 293”.
Geesta kale xildhibaanadan maanta la dhaariyay waxaa ku jira 11 xubnood oo ay hore u soo celiyeen ama u diideen gudiga doorashooyinak dad-ban iyo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, xubnahaasi oo la sheegay in qaar ka mid ah ay ku jireen xildhibaanadii maanta la dhaariyay.
Cumar Maxamed Cabdulle, Guddoomiyaha gudiga doorashooyinka dad-ban ee Soomaaliya waxa uu sheegay in ay maanta uun ka war-heleen in xubnahaasi ay hore u diideen in ay ku jiraan kuwa la dhaariyay, isla markaana ay ka gudi ahaan arrintaasi shir ka yeelan doonaan war-murtiyeed-na ay ka soo saari doonaan.
“Maanta ayuun baanu ku aragnay wargeysyadda iyo idaacadaha, gudigu xeer iyo nidaam ayuu ku shaqeeyaa, arrimahaasi-na wuu ka fadhiisan doonaa, go’aankiisana wuxuu ka soo saari doonaa war-murtiyeed ku aadan go’aankan danbe ee ay madashu gaadhay”ayuu yidhi Cumar Maxamed Cabdulle.
Kadib munaasibadii dhaarinta xildhibaanadda cusub waxaa si ku meel-gaadh ah guddoomiyeyaasha labadda aqal loogu doortay labadda xubnood ee ugu da’da weyn baarlamaanka la dhaariyay kuwaas oo kala ah Cismaan Cilmi Boqore, oo noqday guddoomiyaha ku meel-gaadhka ah ee golaha shacabka ama aqalka hoose iyo Maxamed Xuseen Raage, oo isna loo doortay in uu noqdo guddoomiyaha ku meel-gaadhka ah ee aqalka sare.
Dhinaca kale, munaasibadii lagu dhaarinayay baarlamaanka cusub ayaanay ka soo qayb galin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wakiilka qaramadda midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo sidoo kale danjireyaasha dawladaha safaaradaha ku leh Soomaaliya, marka laga reebo safiirka Turkiga ee Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, baarlamaankan maanta la dhaariyay oo noqonaya kii tobnaad ee ay yeelato Soomaaliya, waxaanay isugu jira kuwo hore u soo ahaa xildhibaano, kuwo siyaasadda ku soo jiray iyo sidoo kale tiro badan oo dhalinyarro ah, kuna cusub siyaasadda iyo xildhibaan-nimadda.